﻿Mzembi Urges Closer SA Tourism Ties
Home » Travel » ﻿Mzembi Urges Closer SA Tourism Ties
“That philanthropic tourism visit by the South African black middle class or assisting international arrivals to the extent that their visit to sister Zimbabwe is understood between, first and foremost, our revolutionary parties, ANC and Zanu PF as a sanctions busting visit that should help a sisterly state in need.”
“We are not doing the bidding for the few remaining white investors but we are being streetwise in the national interest for that matter to keep the remaining 13 percent of this source of market for tourism in Zimbabwe from disappearing altogether otherwise l don’t have a starting point.”
“I have a dream and a dream for the tourism sector and my dream is that by the year 2020, Zimbabwe’s tourism sector shall cost $5 billion in economic receipts and l align this dream to our vision 2020 implemented within the context of our ZimAsset,” he said.
The minister said he was benchmarking his estimates against South Africa’s current tourism annual harvests of US$12 billion against Zimbabwe’s US$1 billion.
Mzembi anchored his dream on the envisaged relaxation of Zimbabwe’s stringent visa regime, a heightened thrust towards domestic and religious tourism and plans to divert major airlines along the Zimbabwean route.
The tourism chief was dismayed that neighbours Botswana, Malawi, Mozambique, South Africa and Zambia continued to receive an average of between 80,000 to 150,000 Chinese tourists annually compared to Zimbabwe’s 5,500.
July 28, 2014 Web Desk Travel No Comment